ရန်ကုန်၊မေ ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ) လေးဆူဓာတ်ပုံရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ၃၉ ကြိမ်မြောက် မဟာဗောဓိကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပူဇော်ပွဲအားမေ၁၄ရက်နေ့၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်းရွှေတိဂုံစေတီတော် ဘဏ္ဍာတော်ထိန်းဂေါပကအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ ဦးခင်မောင်ဌေးက ဆင်ဟွာသို့ ယနေ့မေ ၁၄ ရက် တွင်ပြောသည်။ ဦးခင်မောင်ဌေးက “မနက်ကတော့သစ်သီးဆွမ်းနဲ့ဘုရားကိုအာရုံဆွမ်းကပ်တယ်။ဘုရားကြီးကို ဘုရားဝေယျာဝစ္စအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာတစ်ပတ်ရစ်ပြီးလှည့်လည်ပူဇော်တယ်။ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွေက ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းအိုးလေးတွေကိုင်ပြီးလှည့်လည်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။...
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ) တေးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် တေးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အသစ်ပြုလုပ်ရန် နှင့် သက်တမ်းတိုးလဲလှယ်ရန် အသိပေးကြေညာချက်အား ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ယနေ့ မေ ၁၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတအစည်းအရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “ကျွန်တော်တို့ အစည်းအရုံးအနေနဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနမှာ သက်တမ်းတိုးဖို့ ထောက်ခံချက်လိုအပ်ရင်...
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန်- မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၃၅/၀ အနီးတွင် ယနေ့ (မေ ၁၄ ရက်) နံနက် ၄ နာရီခွဲအချိန်၌ Express ယာဉ်မှ ယာဉ်မောင်း အိပ်ငိုက်ပြီး လမ်းဘေးတွင်ရပ်ထားသော Counter ယာဉ်အား နောက်မှ ဝင်ရောက်တိုက်မိမှု...
Education & Health1 day ago
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဆေးပညာဘွဲ့ရ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ထားသူများအား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စေရေး ကြေညာချက်အား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ယနေ့ မေ ၁၃ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်အဖွဲ့ဝင်၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးက “ကျန်းမာရေးလုပ်သား အရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာနမှာ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို စုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ အဓိကကတော့...
Environment, Disasters & Accidents2 days ago
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ) အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အာစန်နီ(Asani)၏ အရှိန်ကြောင့် ယနေ့ နံနက် မှ မေ၁၃ ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းခြင်း နှင့် အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးထစ်ချုန်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့် ပြည်တွင်းလေကြောင်းပျံသန်းရေး၊ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများအနေဖြင့် လည်းကြိုတင် သတိပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း...
Page 1 of 93812345Next ›Last »
Archived News Select Month May 2022 (197) April 2022 (380) March 2022 (463) February 2022 (426) January 2022 (425) December 2021 (416) November 2021 (401) October 2021 (309) September 2021 (342) August 2021 (303) July 2021 (305) June 2021 (433) May 2021 (376) April 2021 (267) March 2021 (193) February 2021 (154) January 2021 (464) December 2020 (480) November 2020 (394) October 2020 (450) September 2020 (447) August 2020 (531) July 2020 (490) June 2020 (450) May 2020 (436) April 2020 (424) March 2020 (436) February 2020 (339) January 2020 (313) December 2019 (408) November 2019 (361) October 2019 (410) September 2019 (424) August 2019 (392) July 2019 (448) June 2019 (393) May 2019 (455) April 2019 (448) March 2019 (493) February 2019 (471) January 2019 (527) December 2018 (508) November 2018 (476) October 2018 (537) September 2018 (500) August 2018 (557) July 2018 (565) June 2018 (579) May 2018 (565) April 2018 (483) March 2018 (577) February 2018 (470) January 2018 (470) December 2017 (408) November 2017 (449) October 2017 (482) September 2017 (492) August 2017 (521) July 2017 (552) June 2017 (512) May 2017 (446) April 2017 (401) March 2017 (466) February 2017 (460) January 2017 (568) December 2016 (439) November 2016 (467) October 2016 (475) September 2016 (483) August 2016 (531) July 2016 (513) June 2016 (482) May 2016 (546) April 2016 (401) March 2016 (454) February 2016 (435) January 2016 (363) December 2015 (366) November 2015 (329) October 2015 (348) September 2015 (282) August 2015 (282) July 2015 (269) June 2015 (117) May 2015 (127) April 2015 (67) March 2015 (48) February 2015 (89) January 2015 (67) November 2014 (2) August 2014 (3) December 2013 (1)